Koonfurta Afrika, bandhig cusub oo loogu tala galay xashiishka - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Koonfurta Afrika, bandhig sawir aan horay loo arag oo loogu talagalay cannabis
Koonfurta Afrika, bandhig gaar ah oo loogu tala galay cannabis
davis 16 April 2019
Tani waa markii koowaad ee Koonfur Afrika. Magaalada Cape Town waxay martigelisay todobaadkii hore bandhigga ugu horreeya ee loogu talo galay cannabis. Bandhiggan ayaa la qabtaa iyadoo dalka uu sharciyeysana isticmaalka cannabis.
"Sharci-dejinta iyo qawaaniinta saxda ah waxay u fiicnaan karaan kaliya Koonfur Afrika, wadankan guud ahaan. Dhammaadka, waxay gacan ka geysan doontaa horumarinta iyo abuurista shaqooyin. Waxay leedahay faa'iidooyin dhaqaale oo badan, "ayaa ku doodaya Silas Howarth, Agaasimaha Cannabis Expo.
Si kastaba ha ahaatee, suuqgeynta suuqgaan weli waa mamnuuc. Cadaaladu waxay u oggolaatay beerashada beerta, laakiin ma aysan dhicin isticmaalka marijuana ee dadweynaha ama suuqgeynteeda.
"Kahor inta aan go'aanka la sameeyo dadweynaha, waxaa iska cad in waxa laga yaabaa in sharciga ah, ayaa soo jeedinaya James Lee, dhigata EXPO ah. Waxaan u maleynayaa inay jiraan waxyaabo badan oo dhaleeceyn ah, gaar ahaan sababtoo ah waa arrin maxalli ah iyo dhaqameed oo la xidhiidha tuubooyinka dhalada sigaarka iyo isticmaalka daroogada. Waxay u egtahay albaab hore, dadku waxay si cad u eedaynayaan warshadda. Iyadoo ay soo wajahday dhacdooyinka noocaas ah, dadku waxay wax badan ka baran karaan, "ayuu raaciyay.
taageerayaal badan oo ka mid ah cannabis iyo ganacsiga milkiilayaasha ka faa'iidaysanaya warshadaha ee ay aaminsan yihiin in South Africa waa in ay sahamiyaan suuqa xashiishadda. Inta lagu jiro bandhiga afarta maalmood ah, qabanqaabiyeyaashu waxay soo bandhigeen alaabooyin kala duwan oo ka socda dhirtaas.
Waqti dheer ka hor intaan la ogaanin isticmaalka cannabis, haysashada, beerista ama isticmaalka marijuana waa la mamnuucay waxaana lagu ciqaabi karaa shuruudaha xabsiga ee Koonfur Afrika.
Notre-Dame: Ka dib dabka, mashruuca dib-u-dhiska dheeriga ah ayaa lagu dhawaaqay
Notre-Dame de Paris: "ururin qaran" ayaa loo bilaabay dib-u-dhiska
Isku day in aad iska jirtid 18 April 2019 - VIDEO
XIRIIRKA IYO QAADASHADA WAXYAABAAN SAMAYN KARAA
Fox News Poll: Socdaalka iyo Dhaqaalaha ugu Sarreeya Codbixiyayaasha
Horyaalka 1: waxaa garaacay Nantes, PSG weli ma dhamaan karto
Guryihii aadka u liitay: Maxkamad ku taal Faransiiska oo adeerkiis u ahaa adeerkiis Bashar al-Assad
Cameroon - Job Offers79
Congo - Brazzaville - Fursadaha Shaqada6
aan caadi ahayn10
Morocco - Job Offers4
DADKA & LIFESTYLE3,078
Daawooyinka dabiiciga ah47
DIB U EEGID AFRICAN PRESS18
Galmada iyo xiriirada7
Video dheeraad ah649